Public Health in Myanmar: Asthma
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဟာ နာတာရှည်တမျိုးဆိုတော့ ကုသလို့ မပျောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့...။
ကျနော့်အမေဟာ အရင်ကတော့ ဆောင်းတွင်း အေးတဲ့အချိန်မှာ ရင်ကျပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အခုတော့ အချိန်မရွေး ရင်ကျပ်လေ့ရှိပြီး ဆေးထိုးလိုက်မှ သက်သာတဲ့အဆင့် ရောက်နေပါပြီ။ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတယောက်နဲ့ ပြကြည့်လိုက်တော့ သူပေးတဲ့ဆေးနဲ့ တည့်လို့ထင်ပါရဲ့ တနှစ်လောက် တော်တော်လေး သက်သာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုတော့ အရင်လိုပဲ အမြဲတမ်းလိုလို ရင်ကျပ်ကာ မောနေပါတယ်။ ဆေးထိုးလိုက်ရင် သက်သာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီပြနေကျ ဆရာဝန်ကို မေးကြည့်တော့လည်း “ဘယ်သူနဲ့မှ ပြမနေတော့နဲ့..၊ ဒီလိုပဲ ဆေးထိုးလိုက်.. သက်သာလိုက်နဲ့ သွားတော့မှာပဲ...၊ ကုလို့မရတောဘူး”လို့ ဆိုပါတယ်။
တကယ်ပဲ မရတော့ဘူးလား...။ ကျနော့်အမေ ရင်ကျပ်တာကို မကြည့်ရက်တာကြောင့် သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးများရှိရင် လမ်းညွှန်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဟာ ကုလို့ မပျောက်နိုင်ပါဘူး.. ကိုယ်နဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့ အခြေအနေ ကို သိအောင် ကြိုးစားပြီး ရှောင်ပါ.. ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့ ဆေးကို လိုက်နာသောက်ပါ.. အချို့ဆိုရင် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ သက်သာပျောက်ကင်းနေတတ်ပါတယ်.. ရင်ကျပ်ဖြစ်လို့ မိမိဘာသာ သက်သာအောင် ကုဖို့ ရှူဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်း ဆောင်ထားပါ.. မိမိကိုယ်ကို ရင်ကျပ်ဖြစ်စေတဲ့ အနေအထိုင် အပြုအမူ ရှောင်ကြဉ်ပါက သက်တမ်းရှည်စွာ နေထိုင်နိုင်ပါတယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပန်းနာရင်ကျပ် အမြဲတမ်း ဖြစ်တတ်တဲ့သူအတွက် Puffer လို့ခေါ်တဲ့ ပါးစပ်က ရှူတဲ့ဆေးကို အမြဲတမ်း ဆောင်ထားသင့်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာတော့ ကျွန်မ မသိဘူး။ ရနိုင်ရင်တော့ Puffer က အကောင်းဆုံးပဲ။ အသက်ရှူကျပ်လာတာနဲ့ ဘယ်အတိုင်းအတာထိဖြစ်ရင် ဘယ်နှစ် Puff တနေ့ဘယ်နှစ်ကြိမ် ရှူရမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်ညွန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း လိုက်နာပါ။ တကြိမ်ဖြစ်တိုင်း ဆေးသွားထိုးမှ သက်သာတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဆီမရောက်ခင်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆေးခန်းကို သွားတဲ့အချိန် အသည်းအသန် ဖြစ်ပြီး အချိန်မမီ ဖြစ်သွားရင် အန္တရယ် သိပ်ကြီးပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ဟာ ကုသလို့ မပျောက်ပေမယ့် ကောင်းကောင်း ထိန်းချုပ်လို့ ရတဲ့ရောဂါတခု ဖြစ်တယ်။
A comment containing medical treatment has been sadly removed from this post. Treating patients without examining and/or doing investigations can be dangerous and it is beyond the scope of this joint blog.
Thus, I would like to request commentators not to post medical treatments here.